KDE Plasma 5.20 inosvika pamwe nekuvandudzwa mumapaneru, zviziviso, Wayland uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Iyo itsva vhezheni yakatoburitswa kare kubva kunzvimbo inozivikanwa yedesktop KDE Plasma 5.20, iyo yakavakirwa pachishandiswa iyo KDE Masystems 5 chikuva uye iyo Qt 5 raibhurari uchishandisa OpenGL / OpenGL ES kukurumidza kupa.
Iyi vhezheni itsva yezvakatipoteredza ramba uchiita basa rekuvandudza rutsigiro naWayland, pamwe neiyo kugadzirisa kune madhibhodhi, majeti uye zviratidzo zvekuvharidzira.
1 KDE Plasma 5.20 Kiyi Nyowani Zvimiro
1.1 Taskbar uye Mapanera
1.2 Notifications uye windows
1.3 Dzimwe shanduko dzakakosha
1.4 Nzira yekuwana sei KDE Plasma 5.20?
KDE Plasma 5.20 Kiyi Nyowani Zvimiro
KDE Plasma 5.20 inoenderera nekuvandudza rutsigiro rweWayland, sezvo patova nechikamu chakavakirwa Wayland iyo iri padhuze neparity mukushanda pamwe nekuitwa paX11.
Uye ndizvo izvozvo yeshanduko dzakanangana neWayland tinogona kuwana zvinotevera:
Yakawedzera rutsigiro rweKlipper.
Yakagadziriswa nyaya nekukanda skrini.
Wakawedzera kugona kuisa neyepakati mbeva bhatani.
Yakagadziriswa nyaya nekudzikama kweXWayland, DDX server kuve nechokwadi chekuenderana neX11 kunyorera.
Yakagadziriswa chaiyo kuratidzwa kweKRunner kana uchishandisa iyo yepamusoro pani.
Yakapihwa kugona kugadzirisa iko kumhanya kwekufamba kwembeva uye kutsikisa.
Wakawedzera rutsigiro rwekuratidzira zvigunwe zvewindows mune maneja webasa.
Taskbar uye Mapanera
Nokutadza, rimwe bhaa rebha dhizaini inogoneswa, inoratidzwa pazasi kwechidzitiro uye inopa kufamba kuburikidza yakavhurika windows uye inomhanya kunyorera. Panzvimbo pemabhatani echinyakare ane zita rechirongwa, ikozvino chete maekoni emifananidzo anoratidzwa.
Iyo pani ine zvakare kuunganidzwa nekushandisa inogoneswa nekukasira, saka ese windows muchishandiso anomiririrwa nekamwechete kudonhedza bhatani.
Kune mapaneru mabhatani, kudzvanya pane iyo inobuda imwe yekuwedzera menyu ikozvino inoratidza chiratidzo chakaita kunge museve.
Wakawedzera iyo kugona kumisikidza windows mumakona mune mosaic modhi kusanganisa makiyi ekumisikidza kuruboshwe, kurudyi, kumusoro uye kuzasi mativi.
On-screen kuratidzwa (OSD) vakagadzirwazve uye izvozvi vashoma kupindas dzinoonekwa kana iwe ukachinja kupenya kana vhoriyamu. Kupfuura iro rakanyanya huwandu hwevhoriyamu nhanho ikozvino inoratidza yambiro yekuti vhoriyamu inodarika zana%.
Iyo Clock applet inoratidza iro razvino zuva uye iyo pop-up dialog ikozvino inowoneka yakawanda compact.
Wakawedzera a sarudzo yekumaneja maneja kudzima kudzikisira windows mabasa anoshanda pakadzvanya. Kubaya pazvinhu zvakarongedzwa muTask Manager izvozvi kutenderera kuburikidza nebasa rega rega nekutadza.
Notifications uye windows
Zvishandiso zveGTK iine madhairekita nemamenu munzvimbo yezita ikozvino ivo vanoremekedza iyo KDE kumisikidzwa yemabhatani munzvimbo yemusoro.
Yambiro yakapihwa nezve kuneta kwenzvimbo yemahara pachikamu chehurongwa, kunyangwe dhairekitori repamba riri pane chimwe chikamu.
Wakawedzera mamiriro ekubvumira KRunner kuti ishandise inoyerera windows isina kumisikidzwa kumusoro.
Iyo 'Chidimbu Chekuzivisa' applet yakapihwa zita rekuti 'Disks & Zvishandiso' uye yakawedzerwa kuti ipe ruzivo nezvese anotyaira, kwete ekunze chete.
Uye zvakare, yakawedzerwa kuratidzwa kwekunyevera kwekukanganisa uye zviitiko zvekutarisa mamiriro ema disks akagamuchirwa kuburikidza nemaitiro eSMART.
Mune iyo yekumisikidza, kujekesa kweakashandurwa kukosha kunoitwa, ichikubvumidza iwe kuti uone zvakajeka kuti ndeapi eesarudzo akasiyana neakasarudzika tsika.
Dzimwe shanduko dzakakosha
Pfupiso yekhibhodi yekufambisa windows zvachinja uye gadzirisa saizi: pachinzvimbo chekudhonza negonzo uchinge wakabata pasi kiyi yeAlt, Meta kiyi ikozvino yashandiswa kudzivirira kunetsana nemubatanidzwa wakafanana unoshandiswa mumaapplication.
Mamwe malaptop ane sarudzo yekumisikidza bhatiri muganho pazasi pe100% yekuwedzera hupenyu hwebhatiri.
Wakawedzera iyo kugona kushandura zoom level mu browser control widget nekutenderera vhiri rembeva uku wakabata pasi kiyi yeCtrl.
Nzira yekuwana sei KDE Plasma 5.20?
Kune avo vanofarira kugona kuwana iwo mapakeji nyowani, unogona kuwana rairo dzekusiyana kwakasiyana kweLinux Mune inotevera chinongedzo.
Uye zvakare, basa reiyo nyowani vhezheni rinogona kuongororwa kuburikidza neyakavhurikaSUSE Live chirongwa uye iyo KDE Neon Mushandisi Shanduro chirongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » KDE Plasma 5.20 inosvika pamwe nekuvandudzwa mumapaneru, zviziviso, Wayland uye nezvimwe
nawr Kwakanaka sei, ZVAKATOGADZIRA !! inotarisirwa nevashandisi vakawanda. Ndinovimba uye pamushini wangu wekare ndinogona kumhanya pasina matambudziko: D
OpenOffice.org inopemberera makore makumi maviri uye LibreOffice inokumbira Apache OpenOffice kuti ijoine